Fahafatesana - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Maty)
Ny fahafatesana dia ny fitsaharan' ny aina na ny tsy fisian' ny aina intsony ao amin' ny zavamananaina lazaina hoe "maty". Izany toetran' ny fahafatesana izany dia isehoan' ny tsy fiverenan' ny firindrana eo amin' ny fiasan' ny vatana izay tokony ho afa-miantoka ny fahavelomana, toy ny fihinanan-kanina, ny fifohan-drivotra, ny fisotroan-drano, sns.
Ny karandohan'olombelona dia ampiasaina ho fanoharana lehibe an'ny fahafatesana.
Kuoleman puutarha, Hugo Simberg (1906).
Eo amin' ny sela dia miseho amin' ny alalan' ny fijanonan' ny anjara asa fototra sahanin' ny sela ny fahafatesana. Ao amin' ny zavamananaina maro sela dia mety vokatry ny fahasimban' ny sela izay mitarika amin' ny fahafatesan-tsela aloham-potoana izany, na vokatry ny famerana, na voalahatra mialoha ka miteraka ny famonoan-tenan' ny sela manoloana fisehon-javatra iray mibaiko izany.
Eo amin' ny olombelona kosa, ny fijanonan' ny fo tsy mitepo maharitra alohan' ny hihetsehana indray dia mampametraka fanontaniana ny amin' ny fetra na ny tetezamita eo amin' ny fiainana sy ny fahafatesana. Manoloana io fanontaniana io dia mihevitra ny Fikambanana maneran-tany momba ny fahasalaman' ny biby fa ny fahafatesana dia "ny fanjavonana tsy mifodin' ny fiasan' ny atidoha abaribarin' ny fahaverezan' ny fihetsika hoazy ao amin' ny fototry ny atidoha": ity fikambanana ity dia mamaritra ny fahafatesana ho fahafatesan' ny atidoha, fa tsy fitsaharan' ny fitepon' ny fo sy ny fitsaharan' ny fikorianan' ny ra.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fahafatesana&oldid=1040282"
Dernière modification le 24 Novambra 2021, à 09:39
Voaova farany tamin'ny 24 Novambra 2021 amin'ny 09:39 ity pejy ity.